Previous Article Ndị Uwe Ojii Anambra Anwụchikọọla Ndị Òmèkóòmè Karịrị Otu Narị
Next Article Egwuregwu Ndị Uwe Ojii Nke Ahọ 2020 Abịala Na Njedobe n'Awka
Ya bụ ajọ ọkụ ọgbụgba, dịka onyeisi ụlọọrụ nsọnyụ ọkụ na steeti ahụ, bụ Maazị Martin Agbili siri kọwaa, bụ nke malitere n'elekere anọ nke ọnụ ụtụtụ, dịka ozi ha nwetara siri kọwaa, nke mezịrị o jiri duru ndị òtù ọrụ ya wee gaba n'ebe ahụ ozigbo ozigbo.
Ọ sị na a na-atụ anya na ya bụ ọkụ sitere n'ótù nnukwu ụgbọala a kwụbàrà n'ime ọdụ ahịa ahụ, ma bụrụkwa nke ndị otu ọrụ ya nọ n'Ọnịtsha na ndị nọ n'Awka jikọrọ aka ọnụ wee buso agha n'ụtụtụ ahụ.
O mere ka a mara na ha amabèghị maọbụ chọpụta ihe a dọnyesiri n'ime nnukwu ụgbọala ahụ e ji ebu ibu nke ọ bụ ya dọrọ ọkụ ahụ.
Dịka ọ na-akwa arịrị na ya bụ ọkụ gbarikọrọ ngwaahịa gburu nde kwuru nde Naịra, Maazị Agbili kelèkwàzịrị Chineke na o nweghị onye tụfùrù ndụ ya maọbụ nweta mmerụ ahụ site na ya bụ ajọ ọkụ.
Na ntụnye nke ya n'aha onyeisi ha bụ Maazị David Bille, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze nà ụlọọrụ 'Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC)' bụ Maazị Edwin Ọkadigbo kwùru na ha nàtàra òkù mberede bànyere ya bụ ọkụ ọgbụgba n'ụtụtụ ahụ.
Nke a, dịka o siri kwuo, mezịrị ka onye òtù ọrụ ha na-elekọta mpaghara Idemili North, bụ Stella Ọnwụakagba kpọọ ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ, kọwatara ha maka nke ahụ, ma durukwazie ndị òtù ọrụ nke ya gaba ebe ahụ ozigbo.
Ọ gbara akaebe na ya bụ ọkụ mère mkpamkpa ebe ahụ, ma kpọzie òkù ka e mee nnyocha zuru òkè banyere ya bụ ọkụ, iji chọpụta ihe kpatara ya n'ezie nakwa ka o siri mebidobe ihe.